काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर वेश्यावृत्ति ! - Abhiyan news
काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर वेश्यावृत्ति !
१८ श्रावण २०७८, सोमबार ११:३१ अभियान न्यूजLeaveaComment on काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर वेश्यावृत्ति !
काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर वेश्यावृत्ति गर्ने गरेको पाइएको छ ।
फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन व्यवसाय गराउने दुई जना महिलालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पपक्षमा जेल चलान गरेको हो । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका तीनका प्रिती थापा मगर र झापाको गौरादह नगरपालिका पाँच का ज्योती पोमुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागी केनद्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा जेल चलान गरेको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागी जेल चलान गरिएको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोकका प्रवक्ता समेत रहेका एसपी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अनुरागकुमार द्धिवेदीले जानकारी दिए । मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोले गत असार २१ मा प्रिती थापा मगरलाई र गत असार ३० गते ज्योती पोमुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
वीरगञ्जबाट काठमाडौंमा आमाको उपचार गराउन आएकी १६ वर्षका किशोरी आमाको मृत्युपछि बाफलस्थित ज्योती पोमुको घरमा बस्दै आएकी थिईन । आमा मार्फत चिनजान भएकी ज्योतीले बाफलस्थित फ्ल्याटमा किशोरीकै अगाडी अन्य केटी बोलाएर वेश्यावृत्ति गरादैँ आएकी थिईन ।
बीनाले किशोरीलाई गाली गरेको थाहा पाएपछि प्रिती थापाले ‘थानकोटमा मेरो कोठामा हिँड, त्यहाँ बच्चा रेखदेख गर् तिमीलाई पढाइदिन्छु’ भनेर उनले आफ्नो फ्ल्याटमा राखिन । थानकोटमा लगेर प्रीतिले किशोरीलाई फकाएर यौन व्यवसायमा लगाएको ब्यूरोका प्रवक्ता द्धिवेदीले बताए । वेश्यावृत्तिमा लगाएपछि किशोरी भागेर ‘नेप्लीज होम’ नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएकी थिईन ।
देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै महासकस, शीर्ष नेता छलफलमा
ओलीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कर्णालीका चार एमाले सांसदको पद गयो
१५ अध्यादेश सदनमा पेस गर्दै देउवा सरकार, अपराह्न ४ बजे संसद बैठक बस्दै
२३ भाद्र २०७८, बुधबार ०२:४० अभियान न्यूज
पर्याप्त मात्रमा मल खरिद गर्न सरकारी कम्पनी असफल ! किसानले यसवर्ष पनि मल नपाउने
५ मंसिर २०७८, आईतवार ११:५० news DM
मन्त्रालयको बाँडफाँड सकियो, कसको भागमा कुन मन्त्रालय पर्यो त !
२० आश्विन २०७८, बुधबार १०:४७ अभियान न्यूज